Guddiga Qaban qaabada doorashada guddoomiyaha golaha shacabka oo lagu dhawaaqay – Kalfadhi
Guddiga Qaban qaabada doorashada guddoomiyaha golaha shacabka oo lagu dhawaaqay
Fadhigii maanta ee Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa maanta looga dhawaaqay xubnaha guddiga qaban qaabada ee doorashada guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya oo uu iska casilay guddoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari).
Guddigan waxaa la magacaabay 19kii bishan Abriil.
12-kii bishan Abriil ayay ahayd markii uu Guddoomiye Jawaari xubnaha Golaha shacabka ka hor sheegay inuu xilkii Guddoomiyenimo uu baneeyay.
Guddigaan oo ka kooban 15 xildhibaan ayaa 15 cisho gudahood kusoo diyaarin doonna doorashada Guddoonka golaha Shacabka.
‘’ Kadib markan dhageystay soo jeedinta xildhibaannada golaha shacabka,waxaan halkan hoose ku magacaabay guddiga qaban qaabada doorashada guddoomiyaha golaha shacabka,’’ ayuu yiri,Mahad Cabdalle Cawad.
Xubnaha guddigaan ku jira waxaa golaha ka hor akhriyay Mahad Cabdalla Cawad, guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha shacabka xubnahasi waxaa kamid ah:-
1-Xildhibaan Axmed Cusmaan Ibraahim (Daqare)
2-Xildhibaan Cabdfitaax Maxamed Cali
3-Xildhibaan Cabdifataax Qaasim Maxamuud
4-Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aaden (Shaacir)
5-Xildhibaan Canab Xasan Cilmi
6-Xildhibaan Deeqa Xasan Cumar
7-Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar
8-Xildhibaan Maxamed Cabdikaafi Maxamed
9-Xildhibaan Nuur Iidow Bayle
10-Xildhibaan Saciid Maxamed Maxamuud Xayl
11-Xildhibaan Xasan Cali Maxamed ( Amar Dambe)
12-Xildhibaan Xiis Aadan
13-Xildhibaan Yacquub Cali Maxamed
13-Xildhibaan Sahra Cabduqaadir Cabdiraxmaan
15-Xildhibaan Saynab Maxamed Caamir.
Maktabadda qaranka Soomaaliya oo dib loo furay
Xildhibaan Cabdullaahi Faarax Wehliye oo maanta lagu dhaariyay xarunta golaha shacabka